Iqinisekisiwe: iNubia Red Magic 2 iya kufika nge-10 GB ye-RAM | I-Androidsis
Enye ifowuni iya kufika nge-10 GB ye-RAM, kwaye yiNubia Red Magic 2
I-brand brand ye-smartphone, iRed Magic evela eNubia, kutshanje iqinisekisile ukuba kungekudala izokwazisa i-Red Magic 2 ye-smartphone. midlalo, Umlingo obomvu weNubia yoqobo yayinikwe amandla yi-Snapdragon 835, amarhe ajikeleze ibango layo eliza kungena ezihlangwini zikaSpapdragon 845. I-Nubia namhlanje iqinisekisile amanqaku aphambili aya kubakho kwi-Red Magic 2.
Ipowusta engezantsi, esiyibonise ngezantsi, ikutyhila oko I-Red Magic 2 iya kuxhotyiswa yi-SD845, sinethemba lokuba kuluhlu lwe Ezona fowuni zinamandla ze-AnTuTu, kunye nenkumbulo ebanzi ye-RAM esineenkcukacha ezingezantsi.
I-Snapdragon 845 eya kuthi ixhotyiswe kwiRed Magic 2 iya kubhangqwa nayo Imemori ye-10 GB ye-RAM. Umenzi ukwabandakanye inkqubo yokupholisa kabini ngaphakathi kwe-smartphone efanayo naleyo anayo. Xiaomi Shark omnyama uHelo, enye i-smartphone midlalo ene-10 GB ye-RAM njenge Mi 3 Mix. Ukongeza, yenziwe ngobuchwephesha bokupholisa umoya kunye nolwelo.
Ukufumana amava okuphucula umdlalo, I-smartphone iya kuba nayo imveliso ye-3D ejikeleze isandi kwaye iya kuhambelana nomothuko we-4D.
Okwangoku Akukho lwazi lufumanekayo kwezinye iinkcukacha zeRed Magic 2. Ipowusta iphakamisa ukuba uyilo lwangasemva lwefowuni aluyi kwahluka kakhulu kunangaphambili. Iya kuqhubeka nokufaka inzwa enye yekhamera ngasemva kwayo, njengoko kunjalo nakwintsha. I-Google Pixel 3.
Umhla wokukhutshwa kweRed Magic 2 awukaqinisekiswa. Ukufika kwakho kusenokungabi kude, njengoko inkampani isandula ukuthengisa ifowuni yeRed Magic ngexabiso lesaphulelo. Inkqubo ye- UNubia X Kucwangciselwe ukuba kusebenze ngokusemthethweni nge-31 ka-Okthobha. Ke ngoko, Umenzi waseTshayina unokwazisa i-Red Magic 2 i-smartphone ngamanye amaxesha ngo-Novemba. Siza kubona ukuba kwenzeka ntoni…
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Enye ifowuni iya kufika nge-10 GB ye-RAM, kwaye yiNubia Red Magic 2
Uyisebenzisa njani into yebhodi eqhotyoshwayo kwi-GBoard
Kuya kuthatha ixesha elingakanani uXiaomi ukufikelela kwi-100 yezigidi zeefowuni ezithengisiweyo?